သင်ကအာရုံစိုက်ပျောက်ဆုံးခဲ့လျှင်သို့ပြန်သွားရန် Track အပေါ် Get ငါးနည်းလမ်းများ
သငျသညျကိုလေ့လာတဲ့အခါမှာသင်ကအာရုံစိုက်ဆုံးရှုံးနေတယ်ဆိုရင်သို့ပြန်သွားရန် Track အပေါ် Get5နည်းလမ်းများ
သင်တစ်ဦးကိုရှာဖွေသည့်အခါတိုင်းဦးတည်ချက်၌သင်တို့ကိုဆွဲသန်းနေတဲ့အကြောင်းကိုအမှုအရာရှိပါတယ် လေ့လာဖို့ရာအရပျ , သင့်မှတ်စုဆွဲထုတ်နှင့်သင်ယူမှု၏စီးပွားရေးလုပ်ငန်းဆင်းရ။ အချို့လူများက (ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးသငျသညျ?) က hard လက်မှာဘာသာရပ်အပေါ်အာရုံကိုဆက်လက်ထိန်းသိမ်းထားဖို့ရှာပါ။ သငျသညျပျင်းပါတယ်။ သငျသညျကို wired ပါပဲ။ သင်ပင်ပန်းပါတယ်။ မင်းအလုပ်များနေတယ်။ သငျသညျအာရုံပြံ့လှငျ့ပါပဲ။ ဒါပေမယ့်ဆုံးရှုံး သင့်ရဲ့လေ့လာနေအပေါ်အာရုံစူးစိုက် သောသူတို့အားပြဿနာများအားလုံးအတူလိုက်ပါရမည်ဟုတစ်ခုခုမဟုတ်ပါ။ ဤတွင်လေ့လာနေသင့်ရဲ့စိတ်ကိုပေါ်ပထမဦးဆုံးအရာမပါလျှင်ကြောင့်အာရုံပြန်လည်ငါးအစိုင်အခဲနည်းလမ်းတွေရှိပါတယ်။
Getty Images | ယောဟနျသ Slater
အဆိုပါပြဿနာ: သင်ကြောငျးအတှကျလေ့လာသင်ယူဖို့ရှိသည်အဆိုပါ junk, ဆိုးရွားစွာ exhaustingly ငြီးငွေ့စရာပါပဲ။ ဒါဟာသင့်ရဲ့စိတ်ကို numbing ရဲ့။ သင့်ဦးနှောက်၏အထူမိုဃ်းတိမ်၌လူးဖြစ်ပါတယ် "ဂရုစိုကျကဘယ်သူလဲ?" နှင့် "အဘယ်ကြောင့်နှောင့်ရှက်?" ဒါကြောင့်ဘာသာရပ်အပေါ်အာရုံစူးစိုက်တိုင်းဖြတ်သန်းဒုတိယနှင့်အတူ ပို. ပို. မဖြစ်နိုင်လာပြီဖြစ်ပါတယ်။ တကယ်တော့အခုအချိန်မှာ, သငျသညျအစားအစားဒီပျင်းစရာ, အချည်းနှီးဘာသာရပ်နှင့် ပတ်သက်. တဦးတည်းကိုပိုပြီးကောင်းတဲ့အချက်ကတော့ဖတ်ရှုဖို့ရှိခြင်း၏ဒုတိယပုံပြင်ကနေကိုယ့်ကိုယ်ကိုပစ်ချင်ပါတယ်။
အဆိုပါဖြေရှင်းချက်: သင်အောင်မြင်တဲ့လေ့လာမှုအပြီးနဲ့တူလုပ်ပေးတစ်ခုခုနှင့်အတူကိုယ့်ကိုယ်၌ဆပ်။ ပထမဦးစွာသင့်ရဲ့အောင်မြင်မှုသတ်မှတ်။ ဤကဲ့သို့သောလေ့လာမှုတစ်ခုရည်မှန်းချက် Set: "ငါဒီအခနျး / 10 ကနေ 25 ကွဲပြားခြားနားသောဖြစ်ရပ်မှန်များကိုသင်ယူဖို့လိုအပ် သည့် ACT အဘို့အမဟာဗျူဟာများ ။ လာမယ့်နာရီကာလအတွင်း / 15 အသစ်များကိုဝေါဟာရစကားလုံးများကို (စတာတွေ)" ထို့နောက်သင်တို့၏အကျိုး set: "ငါကပြုလျှင်ငါအသစ်တစ်ခုကိုအိတ် (etc) ကိုဝယ် / Podcast တခုကိုနားထောင်ရန် / ရုပ်ရှင် / အခြို့သော hoops shoot watch / တစ်ပြေးသွား / ခြောက်လအသစ်သောသီချင်းတွေကိုဒေါင်းလုဒ်ဆွဲနိုင်ပါသည်။ " သင်သည်သင်၏တိုးတက်မှုကိုစောင့်ကြည့်တစ်ခုတည်းသောလူတစ်ဦးဖြစ်နိုင်သည်, ဒါပေမယ့်သင်ကိုယ်တိုင်ကောင်းသောအပြုအမူများအတွက်ဆုလာဘ်ပေးလျှင်ပဲလုပ်ပေးရန်အသုံးပြုသင့်ရဲ့မူလတန်းဆရာကဲ့သို့, သင်ပျော်စရာတစ်ခုခုထားချက်အရအားဖြင့်ပျင်း offset ပိုမိုဖြစ်နိုင်ဖွယ်ဖြစ်လိမ့်မယ်။
ငါက Wired ပေါ့သောကြောင့်ငါအာရုံစိုက်ဆုံးရှုံးတယ်
Getty Images | သောမတ်စ် Barwick
အဆိုပါပြဿနာ: သင် run ချင်တယ်။ သငျသညျအထဲမှာထိုင်ချင်ကြဘူး။ သင့်ရဲ့ခြေထောက်သင်အနိုင်နိုင်သင့်ရဲ့ထိုင်ခုံ၌သင်တို့၏နောက်ကွယ်မှစောင့်ရှောက်နိုင်ပါတယ်, သင့်လက်ချောင်းများကိုရယူရန်နေကြတယ်, လမ်းညွှန်နေကြသည်။ သင်တစ်ဦးအနေဖြင့် kinesthetic သင်ယူသူ : သင်လုပ်ချင်တာအားလုံးရွှေ့ဖြစ်ပြီး, သငျသညျဘာလို့လဲဆိုတော့သင့်ရဲ့ဘောင်းဘီအပေါငျးတို့သပုရွက်ဆိတ်တွေ၏အာရုံဆုံးရှုံးပါတယ်။
အဆိုပါဖြေရှင်းချက်: သင်အစဉ်အဆက်စာအုပ်တစ်အုပ်ကောက်မတိုင်မီသင်၏ system ထဲကကအားလုံးကိုရ, ထို့နောက်ရှေ့ဆက်စဉ်းစားနိုင်မယ်ဆိုရင်။ တစ်ရေရှည်မှာအဘို့အသွားအားကစားရုံ hit, သို့မဟုတ်သင့်လေ့လာမှု session တစ်ခုစတင်ရှေ့တော်၌ရေကူးယူပါ။ သငျသညျရှေ့စီစဉ်ခဲ့ပါဘူးလျှင် - သင်ပြီးသားလေ့လာနေပါတယ်နှင့် antsy လာပြီဖြစ်ကြောင်း - ထို့နောက်မေးခွန်းများကိုအကြားမှာရှိတဲ့ pushups သို့မဟုတ်အကြပ်အတည်းလုပ်ပါ။ သင် hoops ရိုက်ကူးနေချိန်မှာတစ်စုံတစ်ဦးကိုသင်မေးခွန်းများကိုမေးရန်ရနိုင်လျှင်ပိုကောင်းသေး, ကြည့်ရှုပါ။ သင်သည်သင်၏ကြွက်သားကိုသက်ဝင်ရလိမ့်မယ်, သင်၏ဦးနှောက်လည်းအလုပ်လုပ်ရလိမ့်မယ်။ တောင်မှပိုကောင်း - သင့်မှတ်စုမှတ်တမ်းတင်နှင့်သင့်, iPod မှမှတ်တမ်းတင် download လုပ်ပါ။ သင်လမ်းကြောင်းပေါ်မှာဆိုရင်နေချိန်မှာသင်တစ်ဦးဆိုင်ကယ်စီးနင်း, လေ့လာမှုအဘို့အတွက် clip နောက်တစ်ကြိမ်။ အဘယ်သူမျှမ session ကိုတစ်စားပွဲပါဝင်ခဲ့လေ့လာမှုတစ်ခုအဘို့ဆင်းထိုင်လျက်ကပြောပါတယ်!
Getty Images | ဘင် hood ကို
အဆိုပါပြဿနာ: သင်၏စိတ်ကိုပေါ်တစ်ခုတည်းသောအရာအခုအိပ်စက်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ သင်သည်သင်၏ဦးခေါင်းသည်အောက်မှာကြောင်းပျူငှါနွေးထွေးသောခေါင်းအုံးစိတ်ကူးယဉ်နေနှင့်စောင်သင့်ရဲ့မေးစေ့အောက်မှာရုံပိုင်ခွင့်တွေထဲမှာအောင်းနေနိုင်ပါတယ်။ သင်တို့ရှိသမျှသည်ရက်သတ္တပတ်အလုပ်လုပ်ခဲ့ပါတယ်; သငျသညျလေ့လာနေနှင့်အတူလုပ်ဖို့ပိုပြီးဘာမျှချင်တယ်။ သငျသညျအရာကြွင်းသမျှလိုအပ်တယ်, သင်၏တွဲမျက်ခမ်းတည်ငြိမ်အာရုံထံမှသင်တို့ကိုစောင့်ရှောက်နေကြသည်။
အဆိုပါဖြေရှင်းချက်: သင်ဒီမှာမ Doze န်းကျင် revolve ရသောအဘယ်သူအားမျှအနည်းငယ် options များရှိသည်။ ပထမဦးစွာသင်တစ်မောအိပ်ယူသွားနိုင်။ စာသား။ တခါတရံမှာ 20 မိနစ်ပါဝါမောအိပ်ပြန်သင့် system သို့အနည်းငယ်ဘဝ zap ဖို့လိုအပ်ရှိသမျှကိုလှုံ့ဆျောမှုရှိနိုင်ပါသည်။ သင်စာကြည့်တိုက်ထဲမှာနေနှင့်မှေးဖို့စားပွဲပေါ်တွင်သင်၏ဦးခေါင်းချပြီးစိတ်ကူးမပေးနိုင်လျှင်တက်ရ, ထို့နောက်, သင့်ချွေးထွက်ချွတ်လက်သည်းနှင့်တစ်နေရာအေးမြရေတွေ, 10 မိနစ်လမ်းလျှောက်သွားပါ။ လေ့ကျင့်ခန်းကသင်၏ကြွက်သားနည်းနည်းပနျးနိုငျသျောလညျးသငျအိပ်ရာဝင်ချိန်မှနီးကပ်လွန်းလေ့ကျင့်ခန်းလို့ယူဆတယ်မဟုတ်ပါဘူးအဘယ်ကြောင့်ဖြစ်သော, သင့်စိတ်ထဲထ Rev ပါလိမ့်မယ်။ နောက်ဆုံးအနေနဲ့သင်ဆဲကမလျော့ဘူးလို့ပြောထားတယ်ကိုပဌနာနှင့်အစောပိုင်းထိုညဉ့်သည့်အိတ် hit ထို့နောက်နိုးနေဖို့ရုန်းကန်နေလျှင်။ သင်သည်သင်၏ခန္ဓာကိုယ်ငြိမ်ဝပ်စွာနေရန်သင့်အားပြောပြသောအခါလေ့လာရန်ကြိုးစားနေသဖြင့်ကိုယ့်ကိုယ်မဆိုမျက်နှာသာလုပ်နေတာမဟုတ်ပါဘူး။ သငျသညျအပြည့်အဝညဥ့်အိပ်ခဲ့ရတယ်င့်ပြီးနောက်ကလေ့လာဖို့နာရီအနည်းငယ်စောစောနက်ဖြန်နေ့၌ထရဖို့ပိုကောင်းပါလိမ့်မယ်ဒါကြောင့်သင်ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်လေ့လာရာ၏ထက်ဝက်ကိုမှတ်မိလိမ့်မည်မဟုတ်ပါ။
Getty Images | ဂျေမီကင်
အဆိုပါပြဿနာ: သင်အခုသင့်ရဲ့အသက်တာ၌အကြောင်းကိုရှစ်ဆယ်ကိုးကွဲပြားခြားနားသောအရာတို့ကိုဟန်ချက်ညီပါတယ်။ အဲဒီမှာအလုပ်, မိသားစု, သူငယ်ချင်းအတန်း, ဥပဒေကြမ်းများ, လုပ်အားပေး, ကလပ်အစည်းအဝေးများ, ရေချိုးခန်း, လေ့ကျင့်ခန်း, အစားအသောက်ဆိုင်ဖွင့်ခြင်းနှင့်စာရင်းသင်သည်ပေါက်ကွဲဖို့အဆင်သင့်ခံစားရသည်အထိမသွားတတ်၏။ သင်ရုံအလုပ်များမဟုတ်ပါဘူး; သငျသညျလွှမ်းမိုးပါတယ်။ သင်ညာဘက်ဤဒုတိယလုပ်နေရပါမည်သည့်ဆယ်ခြောက်နဲ့အခြားအမှုအရာတွေအကြောင်းစဉ်းစားစောင့်ရှောက်သောကြောင့်, ဒါကြောင့်လေ့လာနေခက်ခဲသည်ပြုခံရဖို့လိုအပ်ကြောင်းအရာအားလုံးထဲမှာနစ်ပါတယ်။
အဆိုပါဖြေရှင်းချက်: ဒါဟာသင့်ရဲ့ပုံမှမရှိသေးပါအခြားပစ္စည်းကိုထည့်သွင်းဖို့ခက်ခဲနိုင်ပါတယ်, ဒါပေမယ့်ပရမ်းပတာအလယ်၌လေ့လာနေစီမံခန့်ခွဲဖို့အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းတစ်ခုတစ်နှစ်ခွဲနာရီ ယူ. တစ်ပတ်လေ့လာမှုတစ်ခုအချိန်ဇယားသတ်မှတ်ထားရန်ဖြစ်ပါသည်။ အလုပ်ရှုပ်နေလူတွေကိုလေ့လာနေ, လေ့လာနေနှင့်ဖွင့်ပြောပါရစေ, ကုန်စုံစျေးဝယ်သို့မဟုတ်အလုပ်လုပ်မယ့်အကြားရှေးခယျြဖို့ရှိသည်တဲ့အခါမှာသင်အပတ်အတွင်းတစ်ဦးချင်းစီအတွက်လုံလောက်သောအချိန်ကိုဖန်ဆင်းပါတယ်မဟုတ်လျှင်အမြဲပြန်တွန်းရလိမ့်မယ်။ ဒီ Print အချိန်စီမံခန့်ခွဲမှုဇယားကို စတင်ရန်!
အဆိုပါပြဿနာ: သင့်ဖုန်းပေါ်မှာ Facebook ကသတိပေးချက်များရတဲ့စောင့်ရှောက်လော့။ သင်၏မိတ်ဆွေများအခန်းကိုဖြတ်ပြီးရယ်မောနေကြသည်။ လာမယ့်စားပွဲ၌ကောင်လေးကျယ်ကျယ်လောင်လောင်သည်သူ၏ Latt slurping ဖြစ်ပါတယ်။ သငျသညျတိုင်းချောင်းဆိုးခြင်း, တိုင်းတိုးတိုးလေးသည်ရယ်မောသည်စကားပြောဆိုမှုနားထောင်ကြလော့။ သို့မဟုတ်ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးသင့်ကိုယ်ပိုင်အာရုံဖြစ်ကြ၏။ သငျသညျသက်ဆိုင်တဲ့အတွေးအခေါ်များအပေါ်ဆက်ဆံရေးနှင့်ကျိန်းဝပ်စိုးရိမ်, ပြဿနာများကိုစဉ်းစားရပ်တန့်နိုင်မှာမဟုတ်ဘူး။ သင်တို့သည်ဤမျှလေ့လာနေရုံလည်းခက်ခဲသည်, အရာခပ်သိမ်းတို့ကလမျးမလှဲသှားပါတယ်။
အဆိုပါဖြေရှင်းချက်: သင်သင်တို့ပတ်လည်ပတ်ဝန်းကျင်ကနေဆူညံသံများကအာရုံရရှိသူအမျိုးအစားဆိုရင် - ပြင်ပလေ့လာမှု distractors - ထို့နောက်သင်သည်လေ့လာမှုအချိန်အတွင်းမှာကိုယ့်ကိုယ်ခွဲထုတ်ရန်ရှိသည်။ အဘယ်သူမျှမအိမ်ပြန်လျှင်တစ်ခုသာတိတ်ဆိတ်စာကြည့်တိုက်၏နောက်ကျောထောင့်နဲ့တူရာအရပျသို့မဟုတ်သင့်အခန်းထဲမှာလေ့လာတယျ။ မည်သည့်အပိုဆောင်းစကားပြောခန်း, ကျပန်း lawnmowers သို့မဟုတ်အူဖုန်းများထွက်ရေနစ်ရန်သင့်, iPod အပေါ်အချို့သောအဖြူဆူညံသံသို့ Plug သို့မဟုတ် SimplyNoise.com ကဲ့သို့အဖြူဆူညံသံ site ကိုဖွင့်လိုက်ပါတယ်။ သင့်ရဲ့အာရုံပြံ့လှငျ့ရောက်နေတယ်ဆိုရင် ပြည်တွင်းရေး , ထို့နောက်အချို့မှာ peek ယူ လွယ်ကူသောဖြေရှင်းနည်းများ ကိုသင်ရှင်းရှင်းလင်းလင်းစဉ်းစားလေ့လာမှုအချိန်အတွင်းမှာအာရုံစိုက်ထိနျးသိမျးထားနိုငျဒီတော့သင့်ရဲ့အဆိုးဝါးဆုံးကိစ္စဖြေရှင်းရန်။
နားလညျမှုသင်ထောက်ကူစာရွက် 1 Reading
အဆိုပါထိပ်တန်း4လေ့လာမှုဂီတ Apps ကပယနေ့တွင် Download မှ
အဆိုပါကျွမ်းဘားတွေ့ဆုံ Check-list ကို: အဘယ်အရာကိုသင့်ရဲ့ပြိုင်ပွဲအားကစားရုံအိတ်အတွက် Pack မှ
တစ်ဦးဂေါက်ကွင်းအပေါ်တစ်ဦး '' ထိုးမြဲလက်မှတ် Hole '' ဆိုတာဘာလဲ
အီတလီကြိယာ Arrivare များအတွက် conjugation ဇယား
တိုယိုတာမတ် Stop နည်းပညာ
Crickets ကိုအကြောင်း 10 စိတ်ဝင်စားဖွယ်အချက်အလက်
Sappho နှင့် Alcaeus - Lesbos မှစ. သီချင်းစာသားကဗျာဆရာ
စပိန်အွန်လိုင်းသင်ယူခြင်း5အကြောင်းရင်းလွယ်ကူ Is
ချားလ်စ်ဒါဝင် - ဆင့်ကဲဖြစ်စဉ်များ၏သီအိုရီစတင်တည်ထောင်သည့်မျိုးစိတ်သစ်သူ၏မူလအစ
စာပေ Miscellany, အတှဲ 1: ပျော်စရာအချက်အလက်, Quotes နှင့်အသေးအဖွဲ
တောင်ပိုင်းကယ်ရိုလိုင်းနား GPA, SAT နှင့် ACT ဒေတာများ၏တက္ကသိုလ်
Bolt လျှော့ပေးရေးဖို့ဟော့ Torch အသုံးပြုခြင်း
အဆိုပါသူရဲဘောကြောင်ခြင်္သေ့ မှစ. ရဲစှမျးသတ်တိအကြောင်း quotes
တစ်ဦး Bogey ဆိုတာဘာလဲ အဆိုပါဂေါက်သီးရိုက်ရမှတ်များ (ဥပမာများနှင့်အတူ) ချက်နှင့်အဓိပ္ပါယ်
အမေရိကန်တော်လှန်ရေး: ဗိုလ်ချုပ်ချားလ်စ် Lee က